Okuphakelayo Factory, abahlinzeki - China Okuphakelayo Abakhiqizi
Isondli sebhande sinesakhiwo esilula nokusebenza okuzinzile, ikakhulukazi ivolumu enkulu yokuphakelwa iyathandwa ngabasebenzisi. Ukuphumelela kwethu okukhulu kwezobuchwepheshe yidivayisi ephula i-arch, engakhulula ngempumelelo ingcindezi esemlonyeni womgqomo futhi ivimbele okokuchitha okusemlonyeni womgqomo.
ICypB chungechunge le-quantitative disc feeder luhlobo lwemishini yokuphakela yevolumu enokuphakelwa okuqhubekayo. Ifakwe ekwehlisweni kwamadivayisi wesitoreji njengesilo, isililo nomgqomo wamabhakede.
Isiphakeli esidlidliza kabili esisindayo sisebenzisa isimiso sobuningi obuseduze nokudlidlizela kwe-resonance inertial. Amandla we-shear ahlinzekwa ngenjoloba, futhi intwasahlobo enkulu yenjoloba yokudlidliza iyesabeka iminyaka eyishumi.
I-K-type ephindaphinda i-feeder yamalahle isebenzisa indlela yokuxhuma induku yokudonsa ukuhudula ipuleti engezansi lama-degree ayi-5 iye phansi ukwenza ukunyakaza okuhambisanayo ku-roller, ukuze kukhishwe ngokufana amalahle noma ezinye izinto eziyimbumbulu nezimpuphu ezixekethile ngempahla encane yokugaya ne-viscosity encane evela okokusebenza kokudla kokutholwayo.